Ukuvuselela ukuvalwa kwe-Coronavirus covid-19: Xa uvuka kwaye uqaphela ukuba ubanjiwe, yintoni onokuyenza? : UMartin Vrijland
Xa kuqala unyaka ka-2020 ndaziva ukuba izakuba ngunyaka onzima. Ukubona imigca yokugqibela ukuya kwindawo ehleliyo ye-coronavirus covid-19 ngoku kunika ithemba lokuba iya kuphela kungekudala. Ngobusuku obuNtsha, ndibhale: “Ngokumalunga noku, unyaka ka-2020 uya kuba ngunyaka wokudlwengulwa kunye nesantya sokutshintsha. Utshintsho esingazange silubone kwimbali. Ixesha liphelile labalawuli bomhlaba. Kusele iminyaka engama-25 bade babe bodwa. ”
Kwincwadi yam ngasekupheleni konyaka ka-2019, ndaxela kwangaphambili ukuba kwakusafuneka kubekho ubhubhane kwaye ndibonisa ukuba sinikela ubungqina ngenkqubo ye-virus ebanzi. Kwangoko nge-24 kaFebruwari, ndibhale inqaku elibonisa ukuba yayilixesha lokuyeka. Kwadlula iiveki ngaphambi kokuba kubonakale njengengxamiseko eNetherlands. Umfanekiso oshicilelweyo imithombo yeendaba (ngokuchanekileyo) I-IMBers iphepha lokugcina impahla yangasese, ngokokubona kwam, iqhinga leendaba elilumkileyo lobuqili lokuphambukisa ingqalelo kwinto ekufuneka uyithenge: ukutya okude, ukutya okotyiweyo, amanzi, njalo njalo. Ngethamsanqa, abafundi balapha ngexesha elininzi ngaphambi kokuba kuqhume uloyiko.
Ithemba lokuba "cabal" iya kucocwa
Uqikelelo oluninzi oluchanekileyo olulandelayo kwiiveki ezidlulileyo kwaye ndabona ukuba ngawaphi amanyathelo anokulandela. Kungenxa yoko ndihlala ndibuzwa: "Ndenze ntoni ngoku?", "Ndifanele ndenze njani kuwo onke amanyathelo?"
Kwimithombo yeendaba zentlalo ngoku sibona iividiyo njenge UJanet Ossebaard hamba ujikeleze. Ubonisa uDonald Trump njengosindisa uluntu, kwaye ababukeli bayacelwa ukuba bazithobe kuyo yonke into eyenzekayo kubo. Iividiyo zakhe zizama ukukholisa abantu ukuba siyadlalwa, kodwa siyibona ngokucacileyo indima ephindwe kabini yenkcaso elawulwayo apha. UJanet Ossebaard uzama ukuqhuba abantu ukuba bangene kwi-Q-Anon net. Ukwatsho ukuba uDonald Trump uxakekile 'ikalabalkwaye ukuba i-coronavirus idlala indima koku.
Yintoni abantu abangayamkeliyo kukuba uninzi lweendaba zosasazo lwenziwe ukuba l zidlale kabini. Zikunika ithemba lokusindisa abaphambukeli okanye ukuwa kwe-cabal (kunye neTrump njengohlanguli). Kuya kufuneka ndincede abo bantu baphuphe ephupheni: I-cabal ayiyi kuwa.
Ababukeli beividiyo zakhe bafakwe kwindlela yokuhamba. Ndithi kubo:
Utyhalelwa kwimowudi yokungena ngabantu abahlala ngasemva kwekhamera kwaye bakwenze uzive ngathi bayakuhlelela. Kuyinkohliso ukuba iQ-Anon yiklabhu eyimfihlo yabantu abajikeleze uTrump abafuna ukuthatha ubutyebi kude ne-1%. Abazukusindisa! Ngelishwa. Ukudana. Elo lithemba lobuxoki.
I-Trump ngu-cabal. I-Trump nje njengezinto ezilukhuni zokuvala izitshixo zokuvala. Umzobo ocacisiweyo ukuba amashumi amawaka amajoni e-Defender 2020 alungele ukucoca 'i-cabal' eYurophu lithemba lobuxoki.
UJanet Ossebaard ufuna ukuba uhlale uzolile ngaphakathi xa la majoni aqala ukucoca i-elite. Fumana umfanekiso?
Ukuseta kwakhona kwezemali
UJanet Ossebaard ukwatsho ukuba kuzakubakhona ukusetynziswa kwemali apho ubutyebi ngoku bulele nesityebi nge-1% buya kubuyela ebantwini. "Umsindisi omkhulu uTrump uya kukucwangcisela le nto." Hayi, akangekhe. Into aza kuyenza (njengeenkokeli zaseYurophu) iya kukubonelela ngengeniso esisiseko kwaye okunokwenzeka ukuba kufikelelwe kwimicimbi emikhulu, kwiibhanki nakwiingxowa-mali zepenshoni. Ngaba uyazi ukuba ibizwa ntoni? Ubukomanisi.
Sihamba saya kwinkqubo yobukomanisi. Kukaloliwe okhawulezayo. Ndiyichaze ngokweenkcukacha eli nqaku.
Ke okunene siyangqina ukumiselwa kwemali kwakhona, kodwa udidi ngaphandle kweQ-Anon noJanet Ossebaard bayakuxelela. Besendisitsho apha esizeni kangangeminyaka ukuba kwenziwe oko kwenziwa ngokutsha (yabona apha). Intsholongwane kaCorona ngoku ilungile. Ukuthi isihlwele sidlalwe ngandlela-thile okanye ngendlela sivakalayo, kodwa ibali likaJanet Ossebaard ligcwele imigibe yeendaba ezingendawo (ezinje apha caciswe)
Inkqubo yobukomanisi uJanet Ossebaard kunye nabanye abaninzi ngoku bayazukisa, ngelixa bekucela ukuba uhlale phantsi uzolile, inene isecaleni. Iya kuba nye ubuKhomanisi bobuzwilakhe Yiba ngurhulumente.
Kuya kulindeleka ukuba kunokubakho imbinana yezopolitiko eza kulishiya ibala. Oku mhlawumbi kungenxa yokuba kuluncedo ukufaka endaweni yeewindows eziqale le nkqubo yobunqolobi ngeewizns ezintsha 'ngezandla ezaphukileyo'. Sukukhohliswa ngumbono kunye nokugubungela enye imithombo yeendaba ukuba ezinye ii-CEO ezaziwayo ziyekile ukurhoxa. Le yinxalenye yomdlalo wokuphepha we-Q-Anon.
Inkqubo yobukomanisi bobuchwephesha isenokuthetha ukuba uyakufumana iziseko ezisisiseko (umvuzo, izindlu, njl. Njl.), Kodwa ke ukuba uya kubekwa esweni kwetekhnoloji.
Yonke intshukumo oyenzayo iya kubekwa esweni ziinkqubo ezinkulu zedatha. Ukuqubuka kwe-coronavirus kuqinisekisa ukuba iindlela zetekhnoloji eyongezelelweyo zinokuqaliswa ngokukhawuleza. Kuya kufuneka ucinge enye isazisi esidijithali, ethi, umzekelo, iirekhodi obenazo intsholongwane; ingaba uphilisiwe na? ngawaphi amayeza kunye nogonyo olithathileyo kwaye impilo yakho ingaqwalaselwa ngexesha lokwenyani ukusuka efini. Uyinxalenye ye-5G ye-intanethi yezinto.
Ke ukuba uyaphaphama kwaye ubone enye imithombo yeendaba izama ukukugcina kwimeko yokuthetha kunye neenyaniso eziphakathi zidityaniswa nobuxoki kwaye unceda ukwamkela ubukomanisi ngamathemba obuxoki, ngaba uyabona ukuba abakukhombisi kwitekhnoloji ingozi ehlelayo. Bafuna uhlale ngaphakathi kwaye uvumele nje umkhosi kunye namapolisa enze into yawo. Emva kwayo yonke loo nto, beza bezokucoca i-cabal. Hayi, uninzi lwamajelo eendaba aya kuxela ngenguqu kwi-The Hague okanye eBrussels; ubuninzi abayi kukubonisa eyona nto yoyikekayo. Lo mdlalo we-chess uthathela ingqalelo ulindelo lwakho, ukuze uqhubeke nokulandela ingxelo.
Ke ukuba ufuna ngokwenene ukuvuka, kuya kufuneka uqoke ubuxoki njengamabali ka-Q-Anon noDonald Trump. Ukuba ufuna ukuvuka ngokwenyani, kuya kufuneka ubone ukuba kwenzeka ntoni kwaye uqonde ukuba ulawulo lobuzwilakhe alunzeki. Olo lawulo lobuzwilakhe alusekho kude. Ngekhe iphinde. Inkululeko ovunyelwe ukuba uyonwabele iya kubuya kuphela ukuba ufumene 'uphawu'. Ngaba loo nto isikhumbuza isiprofetho seBhayibhile? Ewe, oko kukhumbuza isiprofetho seBhayibhile:
Kwaye akukho mntu unokuthenga okanye athengise ngaphandle kokuba ngubani onophawu, igama lerhamncwa, okanye inani legama lakhe "(ISityhi. 13: 16-17)
Kwincwadi yam ndicacisa ukuba sikwixesha lesiprofetho. Ngelixa abaninzi bekhetha ukungayikhathaleli inkolo kwezi ntsuku, kwaye ngelixa ndingengonqulo lwam, ndiyaqonda ukuba iinkokeli zehlabathi zilandela i-ajenda yenkolo. Akukho sizathu sokuba uTrump abhengeze iYerusalem njengekomkhulu lakwa-Israyeli, kwaye akukho mfuneko yokuba bafuna ukwakha itempile kaSolomon. Kwincwadi yam ndicacisa indlela iinkokeli zehlabathi ezilandela ngayo 'iscript esibonakalayo'. Eso skripti senkosi ngoku siyacaca ngokucacileyo kwaye ngokukhawuleza phantsi kwamehlo ethu.
kwaye uyaqonda ukuba ubanjiwe
Kungekudala siza kufumanisa i-masse ukuba sizivaleleke ngokupheleleyo. Ndiyakrokra ukuba izakuba lixesha elide. Abantu kufuneka boyike kakhulu ukuba bayakwamkela amanyathelo athambileyo. Uninzi luya kukwazi ukubukela abantu bethuthwa ukusuka emva kweefestile zabo okanye ukusuka kwi-balcony. Ithathiwe ngenxa yokuba inokuba yosulelekile okanye kuba "ayimiselanga miyalelo." Kwaye ngenxa yokuba wonke umntu esezindlwini zabo, akukho mntu uncedayo.
Amajelo eendaba azakuqhubeka nokusixelela ukuba uyangqina ngonyango olusulungekileyo kwaye luyimfuneko kwaye akukho mntu uya kwazi ukuba bangaphi abantu abaza kunyamalala kwiiglasi. Enkosi kuJanet Ossebaard ulinda ethule; ngokuzithemba "ukuba uTrump ucoca i-cabal".
Ngokuqinisekileyo sisaya kufumana iiroundups kubantu abaphuma ezitratweni ngenxa yokudinwa kunye nendlala kwaye ke 'musa ukumamela imiyalelo'. Isikhuseli-2020 sikulungele oko (ukungacoci "i-cabal").
Ke, emva kweenyanga okanye mhlawumbi unyaka, ithemba elincinci lokukhululeka liya kuchazwa kwezopolitiko.
Ithemba lokuba imithombo yeendaba kunye nezopolitiko ekugqibeleni ziya kucacisa ukuba kuya kubakho iyeza-elithintela intsholongwane kwaye ke kuya kugonywa. Kwaye kunokuqikelelwa ukuba oku kuyakudityaniswa nokwaziswa kwenkqubo yedijithali (njengoko kuchaziwe apha ngasentla), apho kuhlala kucacile kuye wonke umntu apho akhoyo kwaye leliphi iyeza alifumeneyo, kubandakanya nokubek'esweni okwenyani kwezempilo (kwaye kubandakanya neCRISPR-CAS12 funda kunye nokubhala ukusebenza).
Emva koko unokuhamba kwakhona. Ukusuka kumda ukuya kumda kwaye awusekho kuyo yonke loo mida ivulekileyo, kodwa izithuba zemida yomda ziya kuba zikhulu kakhulu ngokudweliswa kwamanani kunye namanani. Sifumana umahluko kubantu abavumelekileyo ukuba bangene kwiindawo ezithile kunye nabanye abangavunyelwa ukuba bangene. Sijongelela kwiteknoloji “yentsindiso”.
Yintoni esinokuyenza emva koko? Ngaba kufuneka sixhathise izinyo kunye nezipikili? Ndiyakholelwa ukuba ilungelo elisisiseko lomntu alifanelanga ukuba lonyhashwa, kwaye leyo yinkululeko. Ngoku oku kwaphulwe ukusukela kwimemori yexesha kwaye akunakukwazi ukuxhathisa ngokwasemzimbeni ngamapolisa. Ngapha koko, nayiphi na indlela yokuxhathisa iya kucinezelwa ngenkani. Nokuba uthi kwimidiya yoluntu okanye kwigumbi lakho lokuhlala (apho uSiri umamele ngaphakathi) ukuba uzifumana zonke izinto ziyinto ehlekisayo, ungakwimeko yenkululeko.
Nabani na oyinto oyikisayo unokuthi kwaye uya kubeka kude. Konke oku kuyakwenzeka phantsi kwesikhokelo "sombhalo we-coronavirus", kuba abantu abangayilandeliyo imiyalelo okanye banokuthi bacebise abanye ukuba bangalandeli imiyalelo bayingozi eluntwini.
Ngaba andinamacebiso asebenzayo koko unokukwenza. Ewe kunjalo, kodwa loo nto imalunga nokutshintsha kwazi nto kunye nesimo sengqondo esahlukileyo ngokupheleleyo kunokuba kunjalo kwisimo sokusasaza apho imithombo yeendaba kunye nolunye uhlobo losasazo lukuyekisayo. Oko kumalunga nokwenza kusebenze ukuba ungubani ngokwenene. Oko malunga nokusebenza kwentsimi yamandla okudala kunye nokuvela kwakho. Oko kuvakala ngathi kuyadidizela, kodwa akunjalo. Ndiyakucacisela nje, ndiyakuthembisa.
Ngokubona kwiskripthi esikhulu kunye nokwenza uqikelelo oluchanekileyo, kucacile ukuba eli linyathelo elibalulekileyo lokutshintsha kwenyani. Kudala ndatsho ukuba inqaku eli-1 lifutshane kakhulu kule nto. Kungenxa yoko le nto ndisebenze ixesha elide kwincwadi ecacileyo nefundekayo. Ke kufuneka ufunde kuqala, kubaluleke kakhulu ngoku! Kwaye ke ungafunda ukongezwa kuloo ncwadi, apha kwiwebhusayithi.
Sizizidalwa ezinamandla kakhulu kwaye lixesha lokuba siphume sibonisa. Umkhulu kakhulu kunokuba uqaphela! Ixesha lokufumanisa.
Landela eli nqaku: funda apha
Ukuzalwa kweziqhagamshelwano: lukal.nl
tags: Anon, cabal, coronavirus, Covid-19, UDonald, I-IMBers, Janet, Amazing, I-Ox-iindevu, bhe, Q, ngexilongo, ku qhekeka
Alie Muana wabhala wathi:
24 Matshi 2020 kwi-12: 59
Simahla usifumene, simahla uya kunika…
Kutheni ungasikhuphi isisombululo sakho ngokukhululekileyo?
Ndifumana imvakalelo yokukhohliswa ekuthengeni incwadi yakho ukuze ufumane isisombululo sakho.
Andicingi ukuba iyahambelana nezambulo ozivelelayo.
Okanye ndiyaphambana ngalento?
24 Matshi 2020 kwi-13: 18
Ukuba uya kwivenkile ethengisa iBhayibhile, ngaba uyayifumana mahala?
Ukuba uya kwindawo yokubhaka iqhekeza lesonka ngaba usifumana mahala?
Ukuba ubukele umabonwakude, awunayo into ebhalisiweyo?
kwaye uthi "Akukho nto uyifumeneyo, kuba akukho nto uya kuyinika ..."
Akukho kwanto bendiqala ukukwenza oku simahla iminyaka engaphezu kwesixhenxe, kodwa andikwazi ukucela umshicileli ukuba aprinte incwadi yam mahala.
Incwadi inika isishwankathelo sayo yonke iminyaka esi-7 kwaye yonke into eseencwadini ke isimahla kwaye ifundeke simahla ifunyenwe apha kwindawo. Emva koko kuya kufuneka ukhangele kwaye ucofe kwinqaku ukuya kwinqaku. Nangona kunjalo, le ncwadi inika isishwankathelo esincinci kakhulu kwaye iyenziwa; ngesicelo sabafundi abaninzi.
Iya kuthakazelelwa inkxaso yenu noxabiso lwenu. Ngokuqinisekileyo akuyimfuneko. Kuvunyelwe.
U-Esmeevd wabhala wathi:
24 Matshi 2020 kwi-22: 20
Ndiyithengile incwadi yakho! Makhe ndikhuthaze iminyaka. Eyona nto isavakala ilungile kwaye ithembekile ngolwazi nguwe!
Ayingobantu abaninzi endivileyo ngabo.
Umbuzo wam ufunda ngolu hlobo lulandelayo.
Bangasivalela kude kube nini? Kuthetha nabantwana njlnje engathathi ixesha elide kakhulu? Ngaphandle kwalonto nako konke ukwazi ukuba unakho! Awunaloyiko lokuba baya kukukhetha okanye bakwenze unyamalale naphina apho kunokwenzeka (ngamanye amaxesha uzibuze ukuba) zithetha ukuba zonke izinto zinokufundwa kwi-intanethi. Kwaye inokufikelela kude njengokuba inokubonwa ukuba ngubani othenge incwadi? Ukuba sele bezakwenza into ukukuthatha. Ngokuqinisekileyo ndiya kuyifunda ngononophelo incwadi yakho. Thanda kwaye uphathe.
Umama okhathalayo okwangoku, kodwa ukwazi ukuba sinamandla kwaye anamandla ngakumbi kunokuba sicinga! Kodwa uhlala njani umbuzo ..
24 Matshi 2020 kwi-14: 06
Impendulo yakho kuMartin ayicocekanga. Ndivume
24 Matshi 2020 kwi-14: 08
Amaxesha amaninzi azikaze zipapashwe amagama (ngoku uyazi ukuba isebenza njani ... iiprosesa, iiprofayili ezingeyonyani, i-bots ... kodwa ngakumbi ii-IMB'ers) abaphendulayo xa kubalulekile ukuba imithombo yeendaba yoluntu ihlale isisiseko sezimvo zikarhulumente.
24 Matshi 2020 kwi-13: 16
Le yeyona ajenda yabatyholwa abaqhelekileyo, ukungathobeli akuvumi!
24 Matshi 2020 kwi-19: 01
U-Greta Thunberg uyakonwabela ukudlala ngaphandle nabanye abantwana
kubonakala ngathi ayigcinwanga ngokupheleleyo kumgama ukusuka kwisiqingatha semitha
Okanye ngaba walala ngeenyawo eNetherlands ebusuku ngentwasahlobo wabamba ingqele nge-degrees ezingama-6 ngokukaCelsius entwasahlobo?
24 Matshi 2020 kwi-19: 45
24 Matshi 2020 kwi-20: 17
Ewe iqala ukuvela (ukuba ayiyiyo le nto bayifunayo).
24 Matshi 2020 kwi-20: 16
Ndifundile ukuba ubunzulu obungena kumngxunya womvundla kwaye xa ulawula ukufumana imithombo efanelekileyo (ndicinga ukuba le ndawo ngowona mthombo ubalaseleyo eNetherlands) kuya kuba lula ukuba ngumququ ).
Ingqondo yakho iba ngcono ngalo lonke ixesha. (Ndaye ndacinga kwiminyaka embalwa edlulileyo ukuba uBaudet kunye nomz. I-nigel farage babehluke ngokwenene). Ngayiphi na imeko, ngoku ndiyakholelwa kwi-100% epheleleyo
I-99% okanye ngaphezulu kweendawo ezizezinye zilawulwa ngokuchaseneyo
I-100% yabo bonke abapolitiko kwihlabathi liphela balawulwa ngokupheleleyo (besebenzela) abona bantu badala. (ayikho enye engakhange ihlolwe).
25 Matshi 2020 kwi-05: 25
Ikiti !!! Okokugqibela umvuzo osisiseko (nohee, funda inqaku likaMnumzana Vrijland ngoNovemba ka-2019)
Uninzi lwabantu luvuya kakhulu ukuba urhulumente uza kubo nemali!
Imali exhomekeke kwimeko enye yokuhlala.
Imali esiyifunayo, eyathi (abarhanelwa abaqhelekileyo) banayo kakhulu kwaye sinayo incinci kakhulu, ngoku zii-zeros kunye nezo singafikeleli kuzo.
Kodwa sonwabile ngemali kwakhona, uMartin sele enikele inqaku kuyo ngaphambili, inja ngamanye amaxesha ifumana iqhekeza kwaye zonke zilungile, zilande, Hlala, ubuxoki, Pak, Kulungile
Iphakheji icocekile, ilungile
25 Matshi 2020 kwi-10: 23
Ke eMelika bafuna ukwenza uhlobo lokuzazisa kwingeniso esisiseko (3000 usd kusapho ngalunye ndiyakholelwa). Oku kuya kuphumela ekubeni into ebizwa ngokuba yingeniso yethutyana esisiseko (yexeshana yindaba esisigxina) e-US.
Kubonakala ngathi le ngeniso esisiseko iya kuhlawulwa kuphela kwiimali ezibonakalayo (uhlobo lwe-FED bitcoin) ubuncinci ndiyivile loo nto. Ke bonke abantu mabaziqhelanise nezinto ezintsha ze-elektroniki zeLizwe.
Ngokuqinisekileyo oku kuya kwenziwa kwihlabathi liphela.
Kubonakala ngathi abantu e-US nase-Asiya (kodwa ndiyivile le nto ithethwayo) ngoku bakhupha i-5G super ngokukhawuleza (ngaphandle kwe-pushback kuba abantu ngoku benza ezinye izinto). Ndicinga ukuba oku kuyakwenzeka nakwilizwe liphela.
E-Afrika, apho amazwe amaninzi asekhona kwi-3G, andazi ukuba ndingayenza njani le nto.
Kukho nokuba ndithetha ngetekhnoloji ye-6G, andazi ukuba luhlobo luni loyikiso oluza kuzisa. Itekhnoloji entsha ihamba ngokukhawuleza kangangokuba izinto ziyabanjwa ngelixa eyangaphambili ingekaziswanga.
25 Matshi 2020 kwi-10: 52
U-Elon Musk unamarokhethi amnandi kuthiwa aqala ukusebenzisa i-satellite ezininzi ze-5G emoyeni ukuze zifumane umhlaba.
Ndiyazibuza ukuba kwenzeka kanjani le teknoloji, kuba i-5G frequency iya kufuna umgama omncinci, kodwa yile nto uyifumana kwimidiya.
26 Matshi 2020 kwi-06: 54
Ukusukela nge-19 kaMatshi ka-2020, i-COVID-19 ayisathathelwa ingqalelo ukuba sisiphumo esiphezulu sezifo ezosulelayo (i-HCID) e-UK.
.. Ngaphandle kwaseMadurodam 🙂
26 Matshi 2020 kwi-07: 10
Kungenxa yokuba uTrump, uBolsonaro noJohnson bonke bamele uphawu olufanayo: uphawu ngasekunene
Kwaye njengokuba ndibhale amaxesha amaninzi kumanqaku amaninzi, abantu abanjengoRobert Jensen, uAlex Jones kunye nezinto ezinamaphiko asemlonyeni ofanelekileyo mazibe ngumnatha omkhulu wokhuseleko. Kuya kufuneka bafumane abalandeli abaninzi abagxeka imithombo yeendaba eziphambili kunye nezopolitiko eziphambili. Kuya kufuneka bancede ukwakha loo nto kwaye banxibelelanise ngokucacileyo intanda-bulumko leyo. Bamele kwakhona banxibelelanise ngokucacileyo uphawu lwenkampi ka-Trump (Trump, Bolsonaro, Johnson).
Ke loo (brand profiles) iya kuvuthelwa ngokudibeneyo. Indlela esele ikhethiwe yindlela yoku "Bacingela ukuba ayisiyonto imbi kangako ngobhubhani we-coronavirus". Iimpawu ezisekunene zixhunyaniswe 'ngabakholwayo kwintlekele'.
Emva koko umbandela ucinyiwe. Ke uTrump noBolsonaro noJohnson (ukuphela kukaBrexit) kuye kufuneke bemke ebaleni kwaye iphiko lasekhohlo elidala lezopolitiko lithathe kwakhona kwaye abagxeki bangene ejele; Akukho mntu unokuze athandabuze imithombo yeendaba ephambili kwakhona.
Isiphumo: ikomanisi yenkululeko yobukomanisi "ilizwe losindiso" kubandakanya amapolisa ocinga.
29 Matshi 2020 kwi-13: 34
« Nceda uqaphele: uxwebhu lweCovid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) ngumgibe weendaba ezingezizo
I-Trump, Q-Anon kunye 'nokucoca ubunzulu beentsomi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard) »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.236.688
SalmonInClick op I-Coronavirus, Q Anon, iTrump, iBolsonaro, iBoJo, indawo enzulu kunye nokuvalwa kwe-intanethi ngo-Epreli 1?
UHarry makhulu op I-Coronavirus, Q Anon, iTrump, iBolsonaro, iBoJo, indawo enzulu kunye nokuvalwa kwe-intanethi ngo-Epreli 1?